Horudhac: Real Madrid vs Deportivo Alaves… (Los Blancos oo doonaysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee horyaalka La Liga) – Gool FM
(Madrid) 28 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa indhaha ku haysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee horyaalka La Liga, marka ay garoonkooda Alfredo Di Stefano soo dhoweynayaan caawa naadiga Alaves.
Kooxda Tababare Zinedine Zidane ayaa haatan fadhisa kaalinta afaraad ee kala horreynta horyaalka La Liga, waxaana ay lix dhibcood ka dambeeyaan hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Real Sociedad.
Yeelkeede, Deportivo Alaves ayaa iyaduna ku jirta kaalinta 15-aad kala sarreynta horyaalka La Liga kaddib markii ay 10-dhibcood heleen 10-kooda kulan oo ay ciyaareen horyaalka.
Kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka waxa ay Kooxda Real Madrid barbaro 1-1 la gashay naadiga Villarreal, waxaana ay doonaysaa inay dib ugu soo laabato wadada guulaha horyaalka La Liga.
Karim Benzema ayaan wali taam buuxa ahayn kaddib dhaawac soo gaaray, taasoo la micno ah in Mariano uu heli karo kulankiisii saddexaad ee uu ku soo bilaabo safka hore ee Real Madrid.
Nacho ayaa sii wadi doona inuu ka ciyaaro daafaca dhexe ee Los Blancos maadaama uu maqan yahay Sergio Ramos, halka Casemiro uu taam u yahay inuu ku soo bilowdo safka hore kaddib markii uu kursiga keydka soo fariistay bartamihii todobaadkii hore.
Eden Hazard waa inuu ka soo muuqdaa garabka bidix, halka Rodrygo uu heli karo inuu ku bilowdo safka hore kulankan kaddib markii uu keydka ka dhaliyay bartamihii isbuucaan kulankii Inter ee Champions League.
Edgar Mendez ayaa soo laabtay kaddib ganaax uu kaga maqnaa kooxda martida ah, waana inuu ku soo laabto garabka midig.
Ximo Navarro waa inuu ka soo muuqdaa daafaca midig ee Alaves, iyadoo aan la fileynin wax layaab leh kaddib qaab ciyaareedkoodii dhowaa.
Jota waa inuu ku bilaawdaa dhanka bidix, iyadoo Tomas Pina iyo Rodrigo Battaglia aan laga bedeli doonin khadka dhexe sababo la xiriira dhibaatooyin xulasho.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay sideeedii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Deportivo Alaves tartammada oo dhan.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay sagaal ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Los Blancos ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Deportivo Alaves tartammada oo dhan.
>- Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool siddeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kulanka ciyaartay Deportivo Alaves tartammada oo dhan.
>- Kooxda Deportivo Alaves ayaa barbaro gashay saddexdeedii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.